अहिले फेरि एमाले प्रवेशको लहर छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट सयौं कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् । कोही पहिले छाडेर गएकाहरू फर्किरहेका छन् । कोहीचाहिँ अरू पार्टी छाड्दै आइरहेका छन् । त्यसो त चैत लाग्न लाग्यो कि एमाले प्रवेशको लहर शुरु भइहाल्छ । यो अहिलेको कुरा होइन । उहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ । तैपनि, अहिले जो एमाले प्रवेशको लहर चलिरहेको छ । त्यो भने अलग्गै… विस्तृत समाचार
संविधान कताको ?
सरकारले फ्याट्ट संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिहालेछ, अब त्यसलाई कसैले समर्थन नगर्ने भएपछि संकट परेको छ । जसको विरुद्ध ल्याएको हो उसले त विरोध गर्ने भइहाल्यो । तर जसको समर्थनमा ल्याएको हो उसैले पनि समर्थन नगर्ने भएपछि प्रस्ताव संकटमा परेको हो । यस्तो संकटको बेला संशोधन प्रस्तावलाई अचानक रन्जित रेले समर्थन गरिदिनुभएछ । को रन्जित रे भन्नुहोला । उही हाम्रो भारतीय राजदूत महामहिम श्री रणजित… विस्तृत समाचार
डा. अनशन केसी
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा अनमोल केसी लोकप्रिय भए जस्तै चिकित्सा क्षेत्रमा अनशन केसी अत्यन्त लोकप्रिय हुनुभएको छ । अर्थात डा. अनशन केसी । नाम त उहाँको डा. गोविन्द केसी हो । तर काम चाहिँ अनशन बस्नु हो । सधँै अनशन मात्रै बस्ने डाक्टर भएकोले उहाँको नामै डा. अनशन केसी बन्न पुगेको हो भन्दा फरक नपर्ला । अनमोल केसीले त दुई चारवटा मात्रै फिल्ममा खेलेको हुनुपर्छ ।… विस्तृत समाचार
संसद् ख्वै ?
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यतिबेला संसद् अवरुद्ध पार्ने अभियानमा लाग्नुभएको छ । आफू अल्पमतमा परेपछि हरेक पार्टीले गर्ने नै यही हो । संसद चल्न नदिने । अनि संसदमा भन्नुपर्ने कुरा बाहिर सडकमा गएर भन्ने । संसदै नचले पछि कसरी संसदमा भन्ने ? अनि बाध्य भएर सडकमा भन्नुप¥यो । अहिले खड्गप्रसाद ओली पनि त्यही गरिरहनुभएको छ । संसद उहाँले चल्नै दिनुभएको छैन । अनि संसदमा गएर भन्नुपर्ने… विस्तृत समाचार
ड्राइभर सिटमा खलाँसी
अस्ति साझाको नयाँ बस उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले भन्नुभयो कि म बसको खलासी हुँ । अब उहाँ आफैंले आफूलाई खलासी हुँ भनेपछि हामीले होइन कसरी भन्ने ? उहाँ जे हो त्यो उहाँभन्दा बढ्ता अरू कसलाई थाहा होला ? उहाँले आफूलाई खलासी हुँ भनेपछि पो मैले झसंग सम्झेँ, देशको गाडी कहिले यता कहिले उता ढलीमली भएर गुडिरहनुको कारण त यो… विस्तृत समाचार
यसरी पारित गरौं न
संविधान संशोधन प्रस्ताव फेरि अन्योलमा पर्न गएको छ । कारण के भने, यो प्रस्ताव दर्ता गरेर के गर्नु, पारितै हुँदैन । पारित नहुने प्रस्ताव कसरी दर्ता गर्ने ? त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्न सामान्य बहुमत भएर पुग्दैन । पूरै दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अब यस्तो प्रस्ताव कसरी पारित गर्ने ? सरकारलाई टेन्सन छ । तर म भन्छु, यो प्रस्ताव पारित गर्नै नसकिने होइन । मजाले… विस्तृत समाचार
अस्तिको केही साता नेपाली मिडिया पूरै तरकारीवालीले भरिभराउ भयो । बजारमा तरकारी नदेखिए पनि तरकारीवालीचाहिँ छ्यापछ्यापै थियो । जुन बेला मिडियामा तरकारीवाली भाइरल हुँदै थियो उति नै बेला अर्कोतिर ‘सरकारीवाली’ पनि भाइरल बनिरहेको थियो । तैपनि, नेपाली पाठकहरूलाई तरकारीवाली र सरकारीवाली दुवैले उत्तिकै आकर्षित ग¥यो । फरक यति थियो ( तरकारीवाली गोलभेंडा बोकेर आइरहेकी थिई, सरकारीवाली ५० लाख बोकेर गइरहेकी थिई । मिडियामा तरकारीवालीको गोलभेडा… विस्तृत समाचार
जनताको सुविधा बढ्यो है
सांसदको सुविधा बढ्यो । सांसद सुविधा ह्वात्तै । आफ्नो सुविधा आफैं बढाए । सांसदको भत्ता एक लाख । यो साता केही दैनिक पत्रिकाका शीर्षक हुन् यी । सुविधा बढेलगत्तै पत्रिकाले लेखिहाले । सुविधा बढेकोमा किन यति ठूलो रडाको ? सांसद भनेका जनताका प्रतिनिधि । अतः तिनको सुविधा बढ्नु जनताकै सुविधा बढ्नु हो । के जनताको सुविधा बढाउनु अपराध हो ? जनताले राज्यमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने… विस्तृत समाचार
अन्ततः बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय भएको छ । नेपाल आफैंले बनाउने भएपछि जे बनाए पनि खुशी हुनै पर्छ । दुःख त नबनाएकोमा पो छ । बनाउन त जे बनाए पनि हुन्छ ।' तर, फास्ट ट्र्याक नै बनाउने यो निर्णयले भने केही संशय पैदा गरिदिएको छ । किनभने सरकारले फास्ट ट्र्याक बनाउने निर्णय नै यति ‘स्लो’ ढंगले आइदियो कि त्यो आउनु नै संशयको… विस्तृत समाचार
आज बिहानैदेखि भजनलालको दिमाग तातिरहेको छ । मौसम चिसो छ । तर, दिमागमा तातो किन ? भजनलाल आज बिहानै मेरो घर आएर भन्न थाल्यो, ‘यो अंगीकृत नागरिकतामा विवाद किन हँ ?’ दाँत माझ्दै थिएँ । थुऽ गर्दै भनें, ‘अंगीकृत नागरिकतामा विवाद छैन । अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पदमा राख्नुहुँदैन भन्नेमा मात्रै विवाद हो ।’ ‘राखेर के हुन्छ ?’ उसले सोध्यो । ‘राष्ट्रको हित गर्दैन नि !’… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 14 15 16 17 18 Older